Umqamelo kunye nehashi
Indlwana emnandi yezitena zodaka ePopo, itsiba nje indlela eya kwiCuballing Equestrian Centre. Yiza nehashe lakho ebusuku ukuba uyathanda. Indawo yokupaka eyaneleyo. Sinobubele bezinja. Wifi kunye Foxtel.
Iikhilomitha ezingama-35 ukusuka eBarna Mia!
Umqamelo kunye nePoni (iFama yeBhokisi) yindlu yezitena zodaka yasemva kwemfazwe ebekwe kwiihektare ezingama-22. Uya kuhlala kwigumbi leendwendwe, elinebhedi entle kakhulu. IBox Farm yimizuzu eli-15 ngemoto ukusuka eCuballing, kunye ne-35km ukusuka eBarna Mia Animal Sanctuary, eqhuba ukhenketho olumangalisayo lwasebusuku.
IPopanyinning ikwilizwe laseDryandra, elaziwa kakhulu ngeentyatyambo zayo ezintle zasendle. Ngaphezulu kweeyure ezi-2 ze-SE yasePerth, kukuqhuba lula ukusuka esixekweni xa usendleleni eya eMargaret River, Esperance, okanye Albany.
UMarco noGigi bahlala kwiFama yeBhokisi. Sobabini sisebenza ngokusisigxina kwaye sifunda ixesha elizeleyo ngoko ke siyathula kwaye singaphazamisi.